Jaal Marroo: Lola kana Irratti diinni guddoo nate ni salphaates! kanaafi… – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJaal Marroo: Lola kana Irratti diinni guddoo nate ni salphaates! kanaafi…
#Abiyyi moo Jaal Marroo’tu Ollaa du’aa jira?
Ani Jaal Marroof osoo hin taane, Dr Abiyyiifan du’a sodaadha!
Jaal Marroon diina tokko qofa qaba! Diina isaa kanas qajeellotti beeka! Diina kee beekta taanan immoo tolchitee irraa of eegda! Eeyyen Beekta waan ta’eef,osoo si hin dursin dursita! Yoo xiqqaate, jalaa miliqxa; ni dheessita!
Abiyyi garuu hedduu nama marara! Garaa nama nyaata!! Miskiina Diinota kumaatamaan marfamee jiraatuudha. Hunduma caalayyuu immoo diinonni isaa kunniin eenyu akka ta’an adda baasee hin beeku! Eenyu akka isa ajjeesuu danda’u tilmaamunilleen rakkisaadha! Nafxanyaa, Oromoo, Tigree, Sidaamaa, Walaayitaa, Guraagee… hunduma keessaa diina qaba! Garuu eenyummaa diina isaa kana akkam godhee adda yaabaafatu? Namni qullubbii waan hin taaneef fuunfatanii hin ilaalan kaa. Saboota keessaa qofaa miti. Paartiilee keessaallee akkasuma diinota danuu qaba. Biltsiginnaa, Izeemaa, KFO, ABO,
ABIN…kana mara keessaa diinota qaba. Kanaaf jaal Marroo caalaa Abbichuun ajjeeffamuuf dhiyaata (Nama diinan marfametu, sanu haala diinota ofii adda baafachuu hin dandeenye keessa jirutu ollaa du’aa jira jechuu kooti). Ayyaanni haadhasaa isaa yaa eegu malee rakkoo keessa jira! Ani garuu lamaanifuu du’a hin hawwuuf; jiraatanii waan facaafatan fireessaa nyaachuu qabu jedheen Waaqayyo kadhaaf. Waaqayyo kadhannaa koo narraa yaa fudhatu. Aameen.
Via lelisa hussein
Wantii naaf*****nyoota boosisaa jiru Oromoof gammachuu daangaa hin qabneedha.
Ani ergaan Waraana bilisummaa oromoo ta’ee gara waggaa 6 ttin tirachaa jira. Lola yoo ta’ees lixaa oromiyaa bakka milli kiyyaa hin ejjenne hin jiru. Lola anaaf jaallan koo qaqqaliin Wal taanee diina haleelee keessaa guyyaa tokkof diinni Injifannoo nurratti argaatte hin beektu. Yeroo hunda diina maraachiifnee akka Ilmoo reettiitti qalla. Rasaasa akka bokkaa itti roobsuun lafeeshe akkofnaa. Boonbiin nuti darbannu akka bakakkaatti jireenyaaf namummaa irraa mulqaa.hanga kana keessaa garuu takkayuu gammachuu daangaa darbe gammadee hin beeku.
Haaluma kanaan torbaan lama duraa akkumaa Karaa feesbuukii koon ragaa video fi suuraan waliin deggerameen tarkaanfii diina Irratti fudhanneef Injifannoo argamee gurra isiin buusee ijaan illee isiin daawwachisuun koo ni yaadatama.
Lola kana Irratti diinni guddoo nate ni salphaates. Humni mootummaan naannoo oromiyaa qabu Waraana bilisummaa oromoo to’achuu akka hin dandeenye baranni reeffa Waraana isaaniillee osoo hin kaasiin guyyaa 6 bakkee bule.dhumarratti hawaasniif Waraanni bilisummaa oromoo Wal ta’uun qulqullinaa Naannoof akkasumas fayyaa ofiif jecha ofii keenya reeffa isaanii awwaalleefi jirra.
taate ta’ee kana ilaalanni dhiisuun mootummaa naannoo oromiyaaf yaaddoo ta’era. Humna ittiin waan kana qabbanessaan immoo dhabaniiru. Kunis Wal irraa akka isaan ajaja hin fudhanne tolchee jira. Kana irraa ka’uun angawwoonni mootummaa federaalaa, mootummaa naannoo oromiyaa fi mootummaa naannoo amaaraa walii galtee irraa gahuun humna Addaa naannoo Amaaraatti uffaata waraanaa federaalaa (kumaandoo)itti uwwisuun konkolaataa waraanaafi Tata 45 nin Karaa Wallagga bahaa agamsaa irraan naannoo oromiyaatti galchan . Kunis kan ta’eef humna dirmannaa ta’uun mootummaa naannoo oromiyaa gargaaruun #WBO loluuf ture.
Humni addaa mootummaa naannoo amaaraa kun WBO loluun hafee torbaan lamaaf uummata nagaa ajjeesuu hidhuufi qabeenyaa saamuu hojii gadhatan.
Humna amaaraa kana gara horroo guduruutti ceessisuun akka warshaa shukkaaraa finca’aa eegan taasifame.
Egaa dubbiin dirree lola akka uummata harkaa duwwaa dararuufi dhukaasanni ajjeesuu hin ta’u mitiree? Goota godaanisa jaarraa tokkoof walakkaa baatu waliin waliitti dirmaan. Jalqabaa humna Addaa oromiyaatu nu loluuf konkolaataa 3f 3’n dhufee. Caalifnee osoo isaan nuun argiin waan dursinee argineef dabarsinee.
Ittumaa fufuun humni addaa mootummaa naannoo amaaraa konkolaataa 3f 3’n dhuftee. Silayyuu qeerransa Mal nyaadhu Mal nyaadhu jedhuuf reettii na nyaadhu jettu rabbitu waliitti fida mitiree?,Akka isaan bor maqaa keenya hin dhofneetti. Konkolaataa sadanuu namni tokko osoo irraa hin hafiin Jim goonnee fixnee. Loltoota kana keessa namni deebbii dhukaasaa nuuf deebbisee tokkoyyuu hin jiru. Yoo Ajajaa irraa hiiki jedhu laatame irraa hiikuuf bira geenyu hundumtuu dhumee nama lamatu madaa’e jira. Waynee innate, waynee innate waynee innate jecha jedhu qofa afaan isaanii irraa dhageenyee. Yoo bira geenye harkaa kennadhu jennu dhugaa dubbachuuf fincaaniif udaaniin of balleessaniiru!qawweef hidhannoo isaanii hunda erga boojinee konkolaataa isaanii 2 Boombiin waan gubateef ishee tokko haftetti meeshaa naqnee biraa deemne.
Kan naaf****nyonnii torbaan kana boha baatef loltoota ishee namni 36 bakka tokkoti dhumu isaanii ta’uu har’a qaama mootummaa keessaa oduu qulqulluun naa qaqqabee jira.
Gootummaa oromoon jaarraa 16 irraa kaasee kootte dudaa ittiin loleen tilmammee.
Seenaa kanas guyyaa tokko qabadheen dhufa.
Ilmaan Oromoo. Hunduu irraa deebi’een jedha baga Gammaddan.
Jaal Mo’ii irraa
የኤርትራ ጦር በእንጥጮ (Enticho) ከተማ አከባቢ በከፍተኛ ደረጃ መደምሰሱ ዛሬ ተገለጸ፡፡ በሻዕብያ የውግያ ታሪክ እንዲህ ዓይነት ኪሳራ በጭራሽ ደርሶበት አያቅም ተብሏል፡፡
በአሁኑ ወቅት በዋናነት ከትግራይ ሰራዊት ጋር እየተዋጋ የሚገኘው የሻብያ ጦር ብቻ መሆኑ ይታወቃል፡፡ እንዲሁም በአዲግራት እና በእንዳጋሓሙስ መካከል የሚገኘው የኤርትራ ጦሩም መውጫ አትዋል እየተባለ ይገኛል፡፡
የሻብያ ሰራዊት ባለፉት ጥቂት ቀናት በመቀሌ አቅራቢያ በምስራቅ በኩል ከሚገኙተ ከዉቅሮ እና ከአጉአላ ከተማዎች ተደምስሶ መውጣቱ አይዘነጋም፡፡
የአብይ አህመድ ወታደሮች በአብዛኛው ስለተመቱ በመቀሌ አከባቢ እና በደቡብ ግንባር ላይ ብቻ ነው ተሰባስበው እራሳቸውን በመከላከል ላይ ተጠምደው የሚገኙት፡፡
በመሆኑም ጦርነቱ መልኩን ቀይሮ የሚገኝ ሲሆን የትግራይ ክልል ሰራዊት ከስልታዊ ማፈግፈግ ወደ መደምሰስ ስራ ገብቷል እየተባለ ነው፡፡
Miidiyaaleen kunnin dafanii furmaata kaa’achuu qabu. Mootummaan Biltsiginnaa Ethiosatiin taphaan ala nu gochuuf hojjaachaa jira. Nuti hoo Orosat in taphaan ala yoo goone hoo? Naol Nafyad Oromia Times Abdi Jemal Habtamu T Gemechu maal jettu?
WE all Tegarus wish such remarkable and bloodless victory for Jaal Marroo too and freedom for Oromo People in 2021 .